hataru/हटारु: आन्दोलनकारीलाई फोहरा
सवा नौ बजेतिर मीनभवन साइडतिर ढालिएका डिभाइडर उठाउँदै पुलिसले बाटो खालि गर्न खोज्दैथियो । डिभाइडरकै निहुँमा आन्दोलनकारी र पुलिसबीच एकछिन भनाभन भयो । वार्ताजस्तो पनि भयो । तर त्यस क्षेत्रमा खटिएका इन्सपेक्टरले बिहान 'लाठी हान्न आदेश दिएको' भन्दै आन्दोलनकारी उत्तेजित देखिन्थे । त्यसपछि बाँकी रहेका डिभाइडर पनि ढालिए । साढे दस बजेतिर इन्सपेक्टरको भनाइ उद्धृत गर्दै आन्दोलनकारी झन् उत्तेजित देखिए ।
आन्दोलनकारी मीनभवन साइडतिर थिए भने पुलिस बानेश्वर साइडतिर । त्यसैबीचमा कुन पक्षले ढुंगा हान्यो थाहा भएन । झडपको थालनी भयो । चाइनिज अस्पतालअगाडि भएको झडपमा पुलिसले अश्रु ग्याँस हान्यो । गोली हान्यो या हानेन? थाहा भएन । कति घाइते भए देखिएन ।
घाइते सभासद् यशोदा सुवेदी
त्यसलगत्तै एकछिन स्थिति शान्त भयो । मीनभवन प्रतीक्षालयअगाडि बालिएका टायर कमाण्डरले हटाउन आदेश दिए । हटाउन कोशिस गरे तर सकेनन् । बिहान आन्दोलनकारीलाई पुलिसले सडक खाली गर्न भनेपछि भएको भनाभनपछि उनीहरुले टायर बाल्न थालेका थिए । त्यसअघि त्यस क्षेत्रमा कतै पनि टायर बालेका देखिएको थिएन ।
११ बजेतिर आन्दोलनकारीले एभरेष्ट होटलअगाडि पनि टायरको मुश्लो बाले । प्रधानमन्त्री माधव नेपाल बानेश्वरकै बाटो भएर आउने गाईंगुईं चलेकाले संचारकर्मी र आन्दोलनकारीको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
मीनभवन साइडतिर झडप हुँदाखेरि पनि कति अश्रुग्याँस हानिए कति गोली हानियो थाहा भएन । तर त्यसबीचमा बानेश्वरचोकमा भने नाराबाजी मात्र थियो ।
घाइते हुनुअघि सभासद् यशोदा सुवेदी
बानेश्वरचोकमा पूर्वमन्त्रीहरु हिसिला यमी, रामचरण चौधरी, लेखराज भट्ट, गोपाल किराँती, पदम राई, शशि श्रेष्ठ र सभासद्हरु तिलक परियार, यशोदा सुवेदी, भीमप्रसाद गौतम, सावित्रीकुमार काफ्ले, डबलबहादुर शाह, सन्तोषी बिक 'सभासदे कोट'मा थिए । उनहरुकै नेतृत्वमा नाराबाजी भइरहेको थियो ।
१२ बजेतिर बबरमहल साइडबाट वाइसीएल अध्यक्ष गणेशमान पुन दीलिप प्रजापति र चन्द्रबहादुर थापाको नेतृत्वमा आएको जुलुस बानेश्वर चोकमा मिसियो । त्यसबेलासम्म मीनभवन साइडमा तीनचारपालि झडप भइसकेको थियो ।
साढे ११ तिर भएको झडपमा मीनभवन प्रतीक्षालयदेखि मास्तिर दुईजना बच्चा थिए । पुलिसले ुउता जानु भने । उनीहरु कोटेश्वरबाट आएको भन्दै जान नसक्ने बताए । फेरि झडप भयो । उनीहरु प्रतीक्षालयनेर रहेको बारमा टाँसिएर लुके । पुलिसले हानेको अश्रुग्याँसको धुवा मडारियो ।
एकछिनपछि स्थिति शान्तजस्तो भयो । त्यसैबेला एक अधबैसे मीनभवन साइडमा रहेको प्रतीक्षालयबाट चाइनीज अस्पतालतिर बढ्दैथिए । उनीमाथि पुलिस जाइलागे । दुईचार लाठी हानेपछि अर्का पुलिसले रोके । त्यसैबीचमा एकजना फोटो पत्रकार गएर उनलाई अस्पतालको गेटभित्र छिराउन कोशिस गरे । तर गेट बन्द थियो । बर्तौला थरका ती अधबैसे त्यहीका गाड रहेछन् ।
त्यसेबलासम्म बानेश्वरमा नाराबाजी मात्र भइरहेको थियो । झडप हुने कुनै छनक थिएन । सवा १२ बजेतिर प्रधामन्त्री बानेश्वरकै बाटोबाट आउने फेरि चलेको हल्लासँगै पानीको फोहरा हान्ने गाडी चोकमा ल्याइयो । त्यसपछि आन्दोलनकारी चोकमै पलेटी कसेर बसे । उनीहरुले झन् चर्का नाराबाजी थाले ।
फोहरा हान्ने गाडीको अगिल्तिर उभिएर डिएसपी दीलिप चौधरीले हाते माइकबाट आन्दोलनकारीलाई ुबाटो खाली गर्नु भन्दै ुनगरेु बल प्रयोग गर्ने चेतावनी दिए । तर आन्दोलनकारीले ज्यान गए पनि खाली नगर्ने झन चर्का नारा लगाए ।
चौधरीले फेरि चेतावनी दिए । चोकमा आन्दोलनकारी र पुलिसको संख्या बढ्दैथियो । स्थिति तनावग्रस्त हुँदैथियो ।
चेतावनीलगत्तै चौधरीले पत्रकारलाई 'पानीको फोहराले उडाउन सक्ने' भन्दै हट्न आग्रह गरे ।
चोकमास्तिर राखिएको गाडी अघि बढ्यो र फोहरा हान्न सुरु गर् यो । फोहरासँगै अघि बढेका पुलिस र आन्दोलनकारीबीच इँटा र ढुंगा हानाहान सुरु भयो । पुलिसले फोहरासँगै दर्जनौं अश्रुग्यास हान्यो । त्यसबीचमा कति पुलिस र आन्दोलनकारी घाइते भए थाहा भएन ।
घाइते हुनुअघि डिएसपी दीलिप चौधरी
फोहरा हान्ने गाडी पछि हट्न थालेपछि आन्दोलनकारीको इँटा फोहरा हान्ने गाडीमाथि झन् बर्षियो । गाडीकै पछिपछि पुलिस पनि पछि हट्दैथियो । चोकभन्दा झण्डै पाँच मिटर मास्तिर पार्किङ गरिएका पत्रकारका दुईवटा मोटर साइकलमा बल्झिएर भाग्दैगरेका पुलिस लडे । कमाण्डिङ गरिरहेका चौधरी पनि त्यसैमा परे । त्यसैबीचमा पानीको फोहरा हान्ने भ्यान दंगा पुलिसको भ्यानसहित आन्दोलनकारीमाथि जाइलागेका पुलिस अन्तर्राष्टिय सम्मेलन केन्द्रको गेटभित्र छिर् यो । पत्रकारको ससानो हुल पनि पुलिससँगै छिर् यो । त्यसपछि आन्दोलनकारीले गेटनजिकै पुगेर सम्मेलन केन्द्रभित्र ढुंगामुढा गरे भने भित्रबाट पनि पुलिसले अश्रुग्यास हान्यो । त्यसैबीचमा मोटरसाइकलनेर रक्ताम्य भएर लडेका चौधरीलाई पुलिसले सम्मेलन केन्द्रभित्र लगे ।
त्यसपछि केही क्षण स्थिति शान्तजस्तो देखियो । एक हुल पुलिस भित्रबाट निस्केर फेरि आन्दोलनकारीलाई लखेट्न थालेपछि फेरि झडप भयो । झडपमा केही पुलिसले 'आफूहरुले कुटेको मात्र खिचेको' भन्दै फोटो पत्रकारलाई हपारे । आन्दोलनकारी र पुलिस जसले कुटे पनि कुटिरहेको बेला मानवअधिकारवादी लेखिएको लुगा लगाएका कोही पनि देखिदैनथे । उनीहरु झडपपछि पुगेर पत्रकारलाई सोध्थे ।
झडपमा पूर्वमन्त्री रामचरण चौधरी पनि घाइते भए । त्यसलगत्तै बानेश्वर साइडनेर एकजना अधबैसे मानिस कुटिए । बानेश्वर चोकमा भएको झडपपछिको शान्तिकालमा चारजना कुटिए । तर ती आन्दोलनकारी थिएनन् । आन्दोलनकारी त भागिहाल्थे । 'हामीलाई त के कुट्ला' भन्दै िहंडेका सर्वसाधरण कुटिए ।
प्रहरीले हानेको बारबोरको गोलीका खोका देखाउँदै नेता दीलिप प्रजापति
त्यसैबीचमा एकछिन फेरि सन्नाटा छायो । न आन्दोलनकारीबाट ढुंगा प्रहार भयो न त पुलिसबाट नै । आन्दोलनकारी शंखमूल साइडतिर झण्डै तीन सय मीटर तल देखिन्थे । सभासद् यशोदा सुवेदी चोकदेखि दुई मिटरजति तल एक्लै उभिएकी थिइन् । फोहराले निथ्रुक्क भिजेकी उनी 'जुलुस गर्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि बन्देज लगाएको' भन्दै आक्रोश पोखिन् । फोहराको पानीले भिजेको कुर्ताको सलले अनुहार पुछ्दैथिइन् । 'ए बूढी खुरुक्क लागेर उता हट्' भनेर एकजना पुलिस कराए । अपशव्द प्रयोग गर्दै फेरि पछि हट्न भनेपछि उनले 'मुख सम्हालेर बोल्न' भन्दै आफ्ना दिदी बहिनीलाई पनि सम्झन आग्रह गरिन् । आन्दोलनकारी र पुलिस दुवै पक्षलाई 'ढंगा नहान्न' आग्रह गरिन् ।
त्यसैबीचमा तनाव झन् बढ्यो । तर उनी पुलिसकै बीचमा एक्लै उभिइरहिन् । यसैबीच सभासद् भीमप्रसाद गौतमले उनलाई पछि हट्न भने । तर उनले 'दाइ तपाइ पनि यता आउनुस्' भनिन् । गौतम गएनन् । त्यसको केही क्षणपछि फेरि भएको झडपमा गौतममाथि पुलिस जाइलागे । दुईचार लाठी खाएपछि पुलिसले नै गौतमलाई बचाए ।
एकछिन फेरि स्थिति शान्तजस्तो देखियो । सुवेदी पुलिससँग विवाद गरिरहिन् । यसैबीचमा पुलिसतिरबाट ढुंगा हानियो । उनले 'किन हानेको' भनेर पुलिससँग बाँझिन् । यसबीचमा पटकपटक उनलाई केही पुलिसले कुट्न खोजे तर पुलिसले नै बचाए । त्यसबीचमा सुवेदी र पुलिसबीच विवाद भइरह्यो । विवादकै बीचमा आन्दोलनकारीबाट ढुंगा प्रहार भयो । त्यसपछि झडप सुरु भयो । उनी बीचमा परिन् । फेरि शान्त भयो । फेरि झडप भयो ।
फेरि झडप भयो । झडपमा कसले हान्यो कुन्नि उनको टाउको फुट्यो । पुलिसको लाठी लाग्यो या ढुंगा टाउको फुटे्पछि उनी घोप्टो परिन् । त्यसअघि उनीसँगै रहेको एकजना बूढा बाले उनलाई समाए । पुलिसले उनलाई उपचारको लागि लान खोज्यो तर उनले अस्वीकार गरिन् । पुलिसले आन्दोलनकारीको ढुंगाबाट चोट लागेको आरोप लगाइरह्यो भने उनले पुलिसले कुटेको भनिरहिन् ।
त्यसैबीचमा हिसीला यमी उनका बडीगार्ड जनमुक्ति सेना र अर्का सभासद् देखिए । उनीहरुमाथि पनि पुलिस जाइलागे । तर पुलिसले नै रोके । कुट्न दिएनन् । झडपछि केही समय फेरि शान्त भयो । यमीले 'तिम्रा कमाण्डर खै' भन्दै पुलिस कमाण्डर खोजिरहिन् । उनीहरुले कमाण्डर घाइते भइसकेको भन्दै अर्को कमाण्डर नै नआएको बताइरहे । उनले सोधिरहिन्, 'एक कमाण्डर घाइते भएपछि अर्को त होला नि ।'
स्थिति साम्य भएपछि पनि पटकपटक पुलिस र आन्दोलनकारी पक्षबाट ढुंगा हानिएको भन्दै झडपको स्थिति देखा पर् यो । त्यसैबीच आन्दोलनकारीले बार बोरका ६ वटा खोका देखाउँदै 'पुलिसले गोली हानेको' बताए । त्यसको एकक्षणपछि एकजना मानवअधिकारवादीले पनि बारबोरकै एउटा खोका लिएर देखाए । त्यसबेलासम्म स्थिति साम्य भइसकेको थियो ।
Posted by Nabin Bibhas at 7:54 AM
Ashesh December 20, 2009 at 9:21 AM
नविनजी लाई धेरै धन्यवाद यो रिपोर्टिङको लागि । सवै कुरा थाहा भयो ।
samrat December 20, 2009 at 4:03 PM
मानब अधिकारबादीको असली रुप देखाएकोमा धन्यबाद । उनीहरुलाई बन्दमा निषेध गर्नु पर्छ।
Meena Magar December 20, 2009 at 10:56 PM
आमहड्तालको सचित्र बर्णन................ छर्लङग देखियो ।
pani ko fohara hoina sathi. aandolankari ko lagi sital diyeko holani.
Anonymous December 23, 2009 at 3:27 AM
Purna B. Pun
Nepal ko athah jalshrot ko use garnu pardaina sir. Kam se kam khane paani, hydro-electricity ma use nabhaye pani yesma ta majja le.....!!!
हलिखेताला December 23, 2009 at 4:23 AM
फोटोहरु ऐतिहासिक छन् । आदिवासि जनजाति मगर त्यसमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट विचार ले लैस पत्राकार नविन जी को क्षमता को प्रसँशा गर्दछु।
Anonymous December 25, 2009 at 11:35 PM
Without following HUMAN viewpoint & abandoning viewpoint of Pro/Anti We can't solve Social, Economic and Political problems parmanently. Government & Maoists should realize this fact.
हुलमुलमा ज्यान जोगाउनु, अनिकालमा बिऊ जोगाउनु........ भन्छन् ।